Fijoroana ho vavolombelona SGS: Ric sy Giselle ⋆ Mpihira Grace Fahasoavana
Namboarina98323	Febroary 11, 2020
Ny namantsika Dean, tompon'ny SGS, dia nangataka anay hanoratra fijoroana vavolombelona ho an'ilay tranonkala vaovao! SGS dia fitahiana tena lehibe ho anay mivady, noho izany faly izahay mizara kely momba anay ary manolotra teny izay, antenaina fa hamporisika ny hafa!
Ho fahatsiarovana ny fohy, ity misy topy topimaso fohy momba ny fihaonantsika. Tamin'ny fe-potoana Jona / Jolay 2014 dia nahasarika ny masoko izy tamin'ny alàlan'ny famoahana ny forum nataony ary ny fomba fitantanany araka ny tokony ho izy ny soratra masina tao amin'ny lahatsorany. Tamin'ny 3 Aogositra 2014, nandefa hafatra ho azy aho, tamin'ny fampiasana teny nalaina avy tamin'ny iray tamin'ireo lahatsorany farany hanokafana ny varavarana. Ary avy eo dia niandry… ary niandry. Roa andro lava taty aoriana dia namaly izy.
Samy nanambady izahay sy Giselle taloha, ary samy nanan-janaka izahay roa. Ny hafatray voalohany dia teo amin'ny fisarahanay sy ny fianakavianay, na dia niambina anay tamin'ny zavatra nozarainay izahay. Ambonin'izany, nipetraka tany Alabama ny fianakaviako, fa ny azy kosa tany amin'ny Repoblika Dominikanina. Araka izany, nifampiresaka tsotra fotsiny izahay, avy eo nifindra tamin'ny mailaka anay manokana, avy eo WhatsApp, ary farany, Skype.
Tamin'ny 31 Desambra 2014, nihaona manokana tany North Carolina tao an-tranon'ny rahavaviny izahay. Na dia fotoana nahagaga niaraka aza izahay dia efa nahatsapa ho toy ny hoe efa nifankahalala hatry ny ela, nomena ny fotoana rehetra nandanianay ny resaka. Tena nitahy ny fotoana niarahanay ny Tompo ary nanomboka ny fiarahanay tamin'ny 12 Janoary 2015.
Afaka nihaona tamin'ny olona intelo indray izahay, anisan'izany ny fotoana maharitra iray izay nandanian'ireo zanakay fotoana be dia be nifaneraserana. Ny fianakaviana mifangaro dia manana fanamby maro, ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nanome antsika ny fahitana bebe kokoa ny amin'ny fomba fiasanay mianakavy. Nandritra izany rehetra izany dia nanohy nitahy antsika be dia be ny Tompo.
Farany, tamin'ny 22 Desambra 2015, nivady izahay! Ankehitriny, efa-taona taty aoriana, dia manohy mahazo fitahiana mahavariana toy izany avy amin'ny Tompo isika! Na dia tsy lavorary aza isika, dia mbola niasa tamin-kery teo amin'ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra! Izy dia nitahy an'i Giselle tamina vady mahafinaritra (maneso fotsiny, ry malalako!). Izy dia nitahy ny zanako vavy tamin'ny vady aman-dreny matahotra an 'Andriamanitra sy manome voninahitra an' Andriamanitra hananany modely sy fitiavana ho azy ireo. Izy dia nitahy ny zanakavavin'i Giselle sy ny zanany lahy niaraka tamin'ny raikely iray izay manandrana maka tahaka an'i Kristy ho azy ireo. Ary nitahy ahy tamin'ny vehivavy iray tena ankasitrahako Izy. Miala tsiny amin'ny rehetra - vehivavy maro no nanao zavatra tsara indrindra, fa ny vadiko kosa dia mihoatra lavitra azy rehetra.
Ric sy Giselle Crooks
Sokajy: Mpikambana- Mpikarama mandoa
IrisFlower Jona 18, 2020
Misaotra nizara! Fantatro ireo fianakaviana mifangaro, fantatro tsara ireo fanamby. Fijoroana ho vavolombelona mahafinaritra momba ny fandaharana nataon'Andriamanitra na dia amin'ny tantara sarotra aza! Andriamanitra mahery tokoa isika!